ကျွန်တော်များ Amata Holding Public Co., Ltd အောက်ရှိ Amata Hotel လုပ်ငန်းများအုပ်စုဟာ ပထမဆုံးဟိုတယ်ကို ငပလီကမ်းခြေ၌ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး (၁၅)နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များအား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့လို့ Amata Hotels & Resorts အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဆုတံဆိပ်များစွာ လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလောကမှာ အောင်မြင်တဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများအုပ်စုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ ယခုအခါ Amata Hotel အုပ်စုအနေနဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားများ မဖြစ်မနေသွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိတဲ့ ငပလီ၊ ပုဂံ၊ အင်းလေးဒေသများတွင်သာမက အခြား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ခရီးသွားဖွံ့ဖြိုးမှုအလားအလာရှိတဲ့ နေရာဒေသအများအပြားမှာ သင့်လျော်သောဟိုတယ်အမျိုးအစား၊ အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် အရှိန်အဟုန်မြှင့် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလားအလာအရှိဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များ အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုရရှိအောင် အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုလည်း ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသလို၊ ထပ်မံကြုံတွေ့ရမည့် စိန်ခေါ်မှုများလည်း ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရပါဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခိုင်မာတောင့်တင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ပြည်တွင်းပြည်ပ အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများရဲ့ ညီညွတ်မှုအင်အားကြောင့် မည်သည့်အခက်အခဲကိုမဆို အောင်မြင်အောင် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီး၊ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယနေ့အချိန်မှာ အများပိုင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
Amata Holding Public Company ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကအားထားရတဲ့ မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုအဖြစ် အရှိန်အဟုန်မြှင့်ကာ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအပြင် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့် အဖျော်ယမကာရောင်းချခြင်းဆိုင်များ၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ ရေပေါ်ဆင်းသက်လေယာဉ်ပျံများဖြင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များအား Sightseeing ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းများကိုပါ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မိမိတို့ရဲ့ အောင်မြင်အောင် တည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုရလာဒ်ကို အများပြည်သူတို့အား ဝေမျှခံစားစေလိုခြင်းဟာ ဖြူစင်သောစိတ်ရင်းစေတနာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့လူမျိုးများစုပေါင်းပြီး နိုင်ငံတကာစာရင်းဝင် အင်အားကြီးမားသောကုမ္ပဏီကြီးအဖြစ် နောင်အနာဂတ်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ လက်ဆင့်ကမ်းပေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ ဆက်လက်ဦးဆောင်သွားနိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်။
Revenue (Billion Ks.)​
Hotels & Ballooning​
F&B & Other Services
Assets (Billion Ks.)
Equity (Billion Ks.)
Gross Profit (Billion Ks.)
Net Profit (Billion Ks.)
▪ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရီးသွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသောနေရာဒေသများနှင့် တိုးတက်ရန်အလားအလာရှိသောနေရာဒေသများတွင် ယင်းတို့နှင့် သင့်လျော်သောဟိုတယ်များ တိုးချဲ့တည်ဆောက်သွားပြီး ဈေးကွက်လက်ဦးမှု ရယူရန်။​
▪ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားများအတွက် အထူးသက်သာသင့်လျော်သောဈေးနှုန်းဖြင့် တည်းခိုနိုင်မည့် Budget Hotel များအား ‘အဝင်္ဂ’ အမည်ဖြင့် ၃နှစ်အတွင်း မြို့ကြီး ၁၀မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်ဝေစုအား ပြည်ပအင်အားကြီးဟိုတယ်အုပ်စုများ မဝင်ရောက်မီ ခိုင်မာသောဈေးကွက် တည်ဆောက်ထားရန်။​
▪ အပျော်စီးမီးပုံးပျံ ပျံသန်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ပြည်တွင်းတွင် ဆက်လက်တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ပအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်လည်း ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ဆက်လက်တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားရန်။​
▪ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော အဆင့်မီမော်တော်ယာဉ်များဖြင့် Sightseeing ခရီးစဉ်များဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့် အဖျော်ယမကာဆိုင်များ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မိမိဟိုတယ်များတည်ရှိရာမြို့ကြီးများတွင်ဖွင့်လှစ်၍ မိမိတို့လုပ်ငန်းအတွက် ဝင်ငွေပိုမိုတိုးမြင့်ရရှိရေးနှင့် ငွေသားစီးဆင်းမှုတိုးမြင့်လာစေရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်။​
is currently serving as the Chairman of Myanmar Construction and Development Public Co., Ltd., and Myanmar Construction Entrepreneurs Association.
▪ Previously he was the Managing Director of Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited and First Myanmar Investment Company Limited, after joining the group in 1991, taking care of financial services division.
▪ He also served as the Vice-Chairman of Yoma Bank, Ltd and was the Director of Yoma Strategic Holdings Ltd. from 2006-2009. Since 1974, he has practiced law and has in-depth knowledge of Myanmar Corporate and Financial Law.
▪ He received his Bachelor of Arts (Law) in 1973 from the University of Yangon, Myanmar andaBachelor of Law in 1974.
U Kyaw Paing​
, Independent Director – Theta has over 10 years of experience in the financial services sector, covering both debt and equity capital markets and corporate advisory as well as investment management.
▪ She is currently the CEO of Mother Finance,adigital lending fintech platform company.
▪ Her previous work experiences included: Deputy Managing Director at KBZ Group, Director at KBZSC Securities (Myanmar), Director at Temasek Holdings-backed Dymon Asia Private Equity Southeast Asia Fund in Singapore; Deal Structuring and Portfolio Manager of LNG assets at Shell Eastern Petroleum in Singapore; and Engagement Manager at A.T. Kearney, and Associate Director at Standard Chartered Bank (Singapore) corporate structuring and advisory team where she completed initial public offerings, follow-on fundraising and M&A transactions valued in excess of US$7.0 billion.
▪ She completed her undergraduate and graduate education in Massachusetts Institute of Technology (USA) and University of Oxford (UK).
Organization Structure and Share Ownership
Amata Holding Public Co., Ltd.
Myanmar Ballooning Co., Ltd. (51%)
United International Group Co., Ltd. (100%)
Amata Inle Lake
Amata Island Resort (Opening in Nov.2019)
Chairman & Family (87.2%)
Board & Management (12.8%)
Amata's Key Historic Milestones
“ASEAN GREEN HOTEL AWARD” by
ASEAN Hotel Award Society & Myanmar Hotelier Association for Amata Resort & Spa, Ngapali
Amata Resort & Spa, Ngapali (Travelers’ Choice Winner)
Oriental Ballooning (#1 activities in Mandalay and Bagan)​
Amata Resort & Spa, Ngapali (Travelers’ Choice Winner) Amata Resort & Spa, Ngapali/
Amata Garden Resort, Inle (Certificate of Excellence)​
(5-years Hall of Fame Winner of Certificate of Excellence)​
Amata Garden Resort Inle & My Bagan Residence​
My Bagan Residence, Bagan
Hsipaw Resort, Hsipaw